Tanora manan-talenta : Misokatra ny tetikasa « Lapihazo » -
AccueilVaovao SamihafaTanora manan-talenta : Misokatra ny tetikasa « Lapihazo »
Zava-baovao atolotry ny Institut Français de Madagascar, na ny IFM amin’ity taona ity. Misokatra ho an’ireo tanora manan-talenta ny tetikasa « Lapihazo ». Fihaonana natao isam-bolana mba ho sehatra hanehoan’ireo tanora ny talentany amin’ny lafin-java-kanto maro fanao eny an-tsehatra, toa ny hira, dihy, tantara an-tsehatra… Ny sabotsy 12 janoary amin’ny 3 ora tolakandro no hanokafana ny tetikasa « Lapihazo », ka mpanakanto maromaro no hiaraka hanokatra ny sehatra.
Tarika voalohany hanafana ny « Lapihazo » ny tarika Trade Union, izay mpandresy tamin’ny fifaninanana Tremplin Madajazzcar 2017. Tarika izay maneho ny firaisana ao anatin’ny fahasamihafana. Mpanakanto tanora mpiangaly mozika avy amin’ny faritra maro manerana ny Nosy no mandrafitra ny tarika, izay natambatry ny mozika teto an-drenivohitra, ary tapa-kevitra ny hametraka fanamby hanolotra mozika matotra. Ho hita amin’io vaky sehatry ny Lampihazo io ny sangan’asan’ity tarika ity.
Ho avy hanafana ny fanokafana ny « Lapihazo » etsy amin’ny IFM Analakely, ihany koa i Fy Rasolofoniaina, mpamorona sy mpandrindra ary mpihira amin’ny feo miavaka sy tononkira matotra. Niaina nandritra ny 3 taona tany Afrika Atsimo izy, izay nahafahany namoaka ny rakikira voalohany (gitara sy feo), ary nampitondrainy ny lohateny hoe « Reflecting You » tamin’ny 2013. Efa maro ireo sehatra iraisam-pirenena nitondrany ny talentany tou ny tany Cambodge, Inde, Nosy Maorisy ary Allemagne. Anisan’ireo efa voafidy ho mpanakanto mendrika tamin’ny hetsika «Eine Welt Für Alle » tany Berlin izy ny taona 2015. Hanana anjara amin’ity talentan’ity mpanakanto malagasy efa nitondra avo ny kanto Mmalagasy tany ivelany araka izany ny eto an-tanindrazana amin’ny alalan’ny « Lapihazo ».